Ndeipi nzira dzinoshanda dzekugadzira zvigadzirwa uye kuwedzerwa kwekutengeswa kwemitengo?
Kana uri kutarisa kupinda mumusika mutsva kana kuwedzera bhizinesi rako, Amazon pasi rese retailing platform ndiyo mukana wakanaka kune iwe nebhizimisi rako. Kana iwe uchivhiringidza nezvenharaunda yaunoda kutanga bhizinesi rako kana usina bhadhaji yakakwana kuti ugadzire ecommerce site yako, Amazon.com ndechechokwadi chaunoda. Amazon ndiyo chete ye-e-commerce yenyika munyika inopa hupfumi hunoshamisa hunoshamisa hwekukwikwidza kunzwisisika. Uye chikamu chakanakisisa chazvo ndechokuti iwe unogona kuwana iyo kumutengo wakaderera kana kunyange pasina.
Muchikamu chino, tichakurukura maitiro ekutarisira zvakanaka maAmazon uye tinodzidza kuti chii chaunoda kutenga - palline per giochi gonfiabili. Iwe uchawana mazano anobatsira kuti uone sei nharo yako yepamusoro yemakwikwi uye uende kunze kwavo. Tarisira mazano edu achakubatsira kubudirira muAmazon uye kuita kuti bhizinesi rako ribudirire. Saka ngatitenderei mukati maro!
Sarudza mhando yakanakisisa yemusika
Nzira yekutsanangurira misika yemakiti kwaunoda kuwedzera bhizinesi rako ndechekutarisa maAmerica bestsellers list. Kana wakatove wakasarudza niche yako, iwe unogona kushandisa zvakanakisa kutengesa ruzivo kuti uone kuti zvipi zvigadzirwa zvinowanzokwezva kumisika yako yakatarwa uye kuunza nhamba inokosha yekutengesa kuAmazon. Kushandura pane chimwe chinhu, unogona kutarisa kuti inobatanidza chii pamusoro pekutengesa uye kuti vashandi vanoiongorora sei. Kuti uwane zvimwe zvakasiyana-siyana, unogona kutarisa zvikamu zvitsvene kuruboshwe rwepeji. Mamwe mapoka anogona kukupa mamwe mashoko pamusoro pemakasarudzo akasarudzwa uye funga kuvhara misika yako yekutsvaga kusvika. Zvingave zviripo kuti hazvizovizve nechechi-chikamu chechidiki chako, asi zvinoita kuti pane..Kana zvisina kudaro, nyatsoteerera kune zvikamu zvakasiyana-siyana sezvavanokwanisawo kukupa pfungwa yakanaka yebhizimisi.
Tsvaga vatengesi vako VAKASI yepamusika
Nokutsvaga kuburikidza nevanotengesa, unogonawo kuziva vatinhi vako vekutanga niche. Iwe unogona kuwana marongerwo aya paGoogle uye chengetedza zvigadzirwa zvazvo. Uyezve, unogona kuvanza mabhizimisi uye kutenga zvigadzirwa zvavo kutarisa hutano hwevashandi vavo pakutsigira uye nguva yekuendesa. Uyezve, chengetedza zvinowanikwa mumakwikwi enyu ekutanga kuAmazon pamusoro pekunge funnel upsells uye downsells.
Sarudza mishonga yakakodzera kutengesa kumusika wako
Amazon ingakubatsirawo kusarudza michina yaunofanira kutengesa nayo. Idzi ruzivo rwaunogona kuwana kubva kune peji rakagadzirwa-kutengesa peji. Unogona kuwana michina yakabatana yehupamhi hwepamusoro uye mutengo wakaderera. Nokuita kudaro, iwe uchabuda kunze kwevadzidzi vako uye kuwedzera Amazon yako yekutengesa kwekutengesa.
Tsvaga yepamusoro-shanduka kuchinja upsells
Kutsvakurudza Amazon, unogona kuziva kuti upsell iwe unofanise kuishandisa sei mumushambadzi wako wokutengesa. Iwe unogona kuvimba zvakakwana pachikuva ichi sezvo ichiita zvizhinji zveongororo uye kutsvakurudza usati wapa vashandisi chero mhinduro. Saka, tarisa peji yakanakisisa yezvigadzirwa zvaunoda uye chengeta pane zvakatengwa zvakanyanya kubva pane zvakarongwa. Tarisa pasi pechigadzirwa chemifananidzo pane zvikamu zvitatu zvinotevera, uye iwe uchacherechedza "kazhinji kutengwa pamwe" chikamu, "vatengi vakatenga chinhu ichi vakatenga" chikamu uye "zvakabhadhara zvinhu zvakabatana nechinhu ichi" chikamu. Kuongorora zvikamu izvi, uchawana ruzivo rwekukwikwidza ruzivo rwemashoko.